galmudug oo lawareegtay qeybo kamid ah Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo. – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
galmudug oo lawareegtay qeybo kamid ah Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo.
MAREEG 28 November 2015 29 November 2015
Iyadoo Saaka Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug uu ka dhacay Iska hor imaad u dhexeeya Ciidamada Maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa wali Magaalada waxaa laga Maqlayaa Rasaas Goog Goos ah oo ay isku ridayaan Labada Dhinac.
Wararkii ugu danbeeyay ayaa sheegaya in Ciidamada Maamulka Galmudug ay la Wareegeen Xaafado ka mid ah Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo ee Puntland,waxaana ka mid ah Xaafadda Cagaar-weyne,Warshadii hore ee Galeeyda Magaalada Gaalkacyo iyo Kontoroolka Puntland ee dhaca Xadka Labada Maamul.
Goobjoogeyaal ayaa sheegay in Ciidamada Maamulka Galmudug ay halkaa ku sugan yihiin,waxaana Ciidanka kale ee Taabacsan Puntland ay u durkeen dhanka Suuqa weyn ee Gaalkacyo.
Khasaaraha Dhimasho iyo mida dhaawac ee ka dhashay Dagaalka ayaan wali la Ogeyn,waxaana sidoo kale jirta Madaafiic ay isku duur duurayaan Labada Dhinac.
Xaaladda gaalkacyo Ayaa far aha ka baxday waxaana guuldareystay Guud ahaan waanwaantii laga dhexwaday labada Maamul ee Puntland Iyo galmudug taasi oo ay wadeen odayaasha dhaqanka labada Maamul Iyo Dowladda Dhexe. Warar kale oo la xiriira Mowduucaan:
dagaalkii saaka ka dhacay Magaalada Gaalkacyo
Sharmarke oo dib ugu soo laabtay Magaalada Muqdisho